Gabar Soomaaliyeed oo ka mid noqotay xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Bristol – idalenews.com
Gabar Soomaaliyeed oo ka mid noqotay xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Bristol
Gabar Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka mid noqotay mudanyaasha golaha deegaanka magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska.
HIbaaq Jaamac ayaa ka mid ah xildhibaanadii xisbiga shaqaalaha ee Labourka waxana ay guusheeda ka mid ahayd kuraas badan oo ay heleen xisbiga shaqaalaha dalka Ingiriiska.
Hibaaq Jaamac ayaa noqoneysa xildhibaanadii ugu horeysay oo Soomaali ah oo golaha deegaanka ee magaalada Bristol kusoo baxda, waxayna guusheeda qeyb ka ahayd kuraas badan oo ay heleen xisbiga Shaqaalaha (Labour) oo ku guuleystay inta badan magaalada Bristol codbixintii ka dhacday.
Hibaaq Jaamac ayaa ku guuleysatay degmada Lawrence Hill ee ka tirsan magaalada Bristol iyadoo si fudud uga guuleystay xildhibaankii kusoo xigay oo ka socday Xisbiga laguXisbiga Labourka ayaa noqday kan ugu weyn ee magaalada Bristol oo kamid ahayd goobihii uu loolanka ugu xoogan ku dhexmaray xisbiyada u tartamayey golayaasha deegaanka, wuxuuna xisbiga Labourka helay 28 kursi.
Xisbiga kusoo xigay ee Liberalka uu helay 23 kursi, Xisbiga Conservative-ka ayaa helay 14 kursi, halka xisbiga Cagaarka (Green Party) uu helay 4 kursi iyo halka musharaxiinta madaxbanaan ay heleen hal kursi. tilmaamo inay yihiin cunsuriyiinta ee loo yaqaan UKIP (UK independent Party).
Dayuuradaha dagaalka Israel oo duqeeyay saldhig milatari oo ku yaal gudaha dalka Siiriya
Ahlu Sunna oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan shirka London, sheegtayna inaysan ka qeyb geli doonin